Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 30, 2020 00: 00 Awekho amazwana
Ukuntuleka kwemvelaphi yabaholi abaMnyama / nabaholi base-Afrika kuvimbela izwekazi ukuba liqale futhi libhekane nezinselelo zalo. Ukulingiswa kwesikhungo nokusebenza ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: Admi1ku: March 29, 2020 12: 16 Awekho amazwana
I-Covid-19 Imephu Yomhlaba wonke e-KL ngawe - Qhafaza kumephu ukuthola amacala bese uqinisekisa ukushona kwezwe, indawo noma izindlela zokuhamba. ICoronavirus (COVID-19) iyathinta ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 29, 2020 03: 33 Awekho amazwana
Ukuthula kwakhe kukhathaza umuntu ongaphezu koyedwa: ngokusho kwemithombo ekhonjwe eduze kukamongameli waseDRC, owazise i-KL, i-First Lady Denise Nyakeru akezwa nakancane ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 29, 2020 02: 02 Awekho amazwana
Futhi leli gciwane leCorona lingahle libe yisiqunto sokunquma ukugcotshwa kukaMongameli Félix, kanye namaCongo jikelele. Izwe liqophe amacala angama-65 kuphela. Kanjani ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 29, 2020 00: 50 Awekho amazwana
Bazimisela abelungu kukho konke nakho konke. Lesi simo sengqondo sokujabha siyohlala nini? Selokhu kwavela iCovid-19, akukaze kube khona kokuqashelwa okuphawulwe abaholi bakaNoyi ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 29, 2020 00: 30 Awekho amazwana
Idolobha laseChina iWuhan, lapho kwatholakala khona leli gciwane leCorona, uhulumeni waseChina ugunyaze ukuhamba kwabantu nezimpahla zabo lapho, njengakwamanye amazwe aseChina. Impilo ...	Funda kabanzi